लाल सम्राट सीबीडी द्वारा सीबीडी अक्सर पूछे जाने प्रश्न CBD अनलाइन स्टोर
लाल सम्राट सीबीडी द्वारा सीबीडी अक्सर पूछे जाने प्रश्न २०२० मा उत्तम स्वास्थ्य समाधान
सीबीडी तथ्य र रेड एम्परर सीबीडी द्वारा प्रश्न
क्यानाबिडियोल (CBD) के हो?
Cannabidiol वा CBD एक स्वाभाविक रूप देखि हुने cannabinoid र भांग बिरुवा को सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा घटक मध्ये एक हो। CBD उपभोग गर्न को लागी सुरक्षित छ र गैर psychoactive छ। यो लामो समय सम्म नियमित रूप बाट औषधि को साइड इफेक्ट बिना यसको लाभकारी स्वास्थ्य प्रभाव को लागी प्रशंसा गरिएको छ।
के तपाइँसँग साथीहरु छन् जो राज्यहरुमा बस्छन् जहाँ मारिजुआना अझै अवैध छ? तपाइँको साथीहरुलाई जरिवाना र जेल समय एक बिरुवा धूम्रपान को लागी नदिनुहोस्, उनीहरुलाई हाम्रो डेल्टा 8 THC उत्पादनहरु को बारे मा बताउनुहोस् जो संघीय कानूनी रूप मा 50 राज्यहरुमा कानूनी छन्!
के तपाइँको कम्पनी तेस्रो-पक्ष गुणवत्ता र सुरक्षा को लागी तपाइँको उत्पादनहरु को परीक्षण गर्दछ?
हो। रातो सम्राट सीबीडी शुद्धता, शक्ति, र यसको उत्पादनहरु को गुणवत्ता को बारे मा उच्चतम मापदण्ड भएको मा गर्व लाग्छ। रातो सम्राट CBD तेस्रो पक्ष Cannabinoid प्रोफाइलिंग, कीटनाशक परीक्षण, माइक्रोबायोलॉजिकल स्क्रीनिंग, र Terpenes को विश्लेषण को लागी परीक्षण गरीएको छ।
तपाइँको CBD तेल कहाँ बाट हुन्छ?
हाम्रो सीबीडी तेल प्रमाणित कार्बनिक मापदण्ड औद्योगिक भांग कैलिफोर्निया मा हुर्किएको छ र १००% कुनै पनि सिंथेटिक वा कृत्रिम सामाग्री मुक्त छ। औद्योगिक भांग बाट हेम्प तेल वर्तमान मा संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र जहाज को लागी कानूनी छ।
के तपाइँको CBD उत्पादनहरु मलाई "उच्च?"
होइन। तपाइँ एक "उच्च" अनुभूति अनुभव गर्नुहुन्न जब तपाइँ सीबीडी तेल उत्पादनहरु निगलना। CBD तेल रातो सम्राट CBD मा प्रयोग औद्योगिक भांग बिरुवाहरु बाट आउँछ, यस प्रकार यो तपाइँ THC सामग्री को एकै उच्च दिनेछैन।
के तपाइँको सीबीडी उत्पादनहरु मलाई एक औषधि परीक्षण असफल बनाउन?
CBD लाई लार वा मूत्र स्क्रीनिंग मा undetectable मानिन्छ। सबै रातो सम्राट CBD उत्पादनहरु औद्योगिक भांग बिरुवाहरु बाट आउँछ र उनीहरु tetrahydrocannabinol (THC) सामग्री को सम्बन्ध मा लागू नियमहरु संग अनुपालन।
CBD र औषधि परीक्षण मा थप पढ्नुहोस्।
त्यहाँ कुनै नकारात्मक साइड इफेक्ट छन्?
रातो सम्राट सीबीडी उत्पादनहरु सुरक्षित, गैर psychoactive, र कुनै ज्ञात नकारात्मक साइड इफेक्ट छन्।
CO2 निकासी के हो?
रातो सम्राट सीबीडी एक रासायनिक मुक्त CO2 निकासी प्रक्रिया को उपयोग गर्दछ कि दबाव कार्बन डाइअक्साइड को उपयोग गर्दछ एक बोट बाट वांछित फाइटोकेमिकल्स (जस्तै CBD र अन्य cannabinoids) लाई तान्न को लागी। यो प्रक्रिया कुनै पनि आक्रामक रासायनिक विलायक कि प्राय सीबीडी तेल निकाल्न को लागी प्रयोग गरीन्छ समावेश गर्दैन। CO2 निकासी पर्यावरण मैत्री र गैर विषाक्त छ। यद्यपि यो संसारमा सबैभन्दा महँगो बिरुवा निकासी विधि मानिन्छ, यो पनि सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ।
म कसरी CBD लिन्छु र कुन खुराक मा?
तपाइँको आहार मा CBD तेल जोड्नु अघि, कुनै पूरक को रूप मा, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको डाक्टर संग जाँच सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो पदार्थ तपाइँको लागी एक राम्रो छनौट हो। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाइँ केहि विरोधी जब्ती औषधि लिइरहनुभएको छ। सीबीडी तेल को एक विस्तृत विविधता मा उपभोग गर्न सकिन्छ: टिंचर, क्याप्सुल, तेल vaping, sublingual, वा यहाँ सम्म कि सामयिक। जब सीबीडी लिइरहनुभएको छ, सधैं तपाइँले किन्नुभएको उत्पादनको प्याकेजमा निर्देशनहरु पालना गर्नुहोस्।
पूर्ण स्पेक्ट्रम, ब्रोड स्पेक्ट्रम, र शून्य THC CBD उत्पादनहरु बीच के फरक छ?
के तपाइँ फिर्ता नीति प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हो। तपाइँको सन्तुष्टि हाम्रो लागी एक उच्च प्राथमिकता हो, यही कारण हो कि तपाइँको अर्डर एक-० दिन पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी द्वारा समर्थित छ।
के तपाइँ प्रत्येक राज्यमा रातो सम्राट सीबीडी उत्पादनहरु पठाउन सक्नुहुन्छ?
हामी रातो सम्राट CBD उत्पादनहरु प्रत्येक अमेरिकी राज्यमा पठाउन सक्छौं, कान्सास (KS), अर्कान्सस (AR), र लुइसियाना (LA) को अपवाद बाहेक। हामी हाल अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी छैन।